Soomaaliya, 08 April 2019
Wiil 5 sano jir ahaa oo lagu dilay Beledweyne
Mas’uuliyiinta magaalada Belddweyne ayaa cambaareeyey fal si arxan-darro ah loogu dilay wiil shan sano jir ah.
Martida: Maxamed Cabdi Afeey
Barnaamijka Martida Makaroofanka ee todobaadkan waxaan ku eegeynaa xaaladda Qaxootiga Soomaalida ee Kenya. Waxaa marti ku ah Maxamed Cabdi Afeey
Fadhigii Baarlamaanka Somalia oo Buuq ku Dhamaaday
Kullan ay maanta xildhibaanada Golaha Shacabka ee Dowladda Federalka Soomaaliya kaga doodi lahaayeen Amniga Qaranka ayaa buuq ku dhawaamaday, ka dib markii Guddoonka Golaha uu dalbay in saxaafadda banaanka looga saaro kullanka, xildhibaanada qaarna ay diideen.
AFRICOM: Dad ayaa ku Dhintay Weerarada Somalia
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Africa ee (AFRICOM) ayaa sheegay in xog cusub oo ay heleen ay sheegeyso in haweeneey iyo cunug yar ay ku dhinteen weerar dhinaca cirka ah oo ay dayuuradaha Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan warar ku saabsan Somalia oo uu ugu weyn yahay haweenaydii toddobaadkan ku dhashay waddada, ka dib markii loo diiday in cisbitaal ku yaalla Muqdisho.
Tartanka orodka gaaban oo Muqdisho lagu qabtay
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta lagu qabtey tartan orod gaaban ah oo lagu maamuusaayey maalinta nabada adduunka iyo cayaaraha.
Xaguu ku dambeeyey go'aankii ay Somalia ku mamnuucday diyaaradaha Antonov?
Faaqidaadda: Doorashooyinka golayaasha deegaanka Somaliland
Wararka Qaraxii Xaley ka dhacay Muqdisho
Inta ay sheegeen hay'adaha Amniga waxaa ku dhaawacmay qaraxii xaley ka dhacay magaalada Muqdisho sideed qof oo Afar ka mid ah xaalkooda uu aad u liito.
Qarax qasaare geystay ayaa caawa fiidkii ka dhacay agagaarka dugsiga tababarada ciidamada booliska ee Jeneral Kaahiye